ကျော်ထွဋ်ဆွေ | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / ကျော်ထွဋ်ဆွေ
Category Archives: ကျော်ထွဋ်ဆွေ
Bobby Soxer – #21
February 11, 2015 mmsong အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) ကျော်ထွဋ်ဆွေ လွှမ်းပိုင် မိစန္ဒီ Bobby Soxer Media Myanmar Artist New Myanmar Albums
December 22, 2012 MMA အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) ဇေရဲ ကျော်ထွဋ်ဆွေ သဲချစ်ကို Air Air Bunny Phyo MHL Myanmar Artist Myanmar Underground Leaveacomment
SZ – ဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်အောင်လုပ် [album]
01.More Money No Problem– ( SZ ) 02.ပန်းဘဲတန်းက-( SZ(Be The Best) 03.ရှယ်ပဲ-( SZ Feat စိုးကြီး ) 04.ချစ်ပြမယ်-( SZ Feat အိမ့်ချစ် ) 05.Warning– ( SZ ) 06.ရှိုးပွဲထဲကအကြောင်း– ( SZ ) 07.မမုန်းလိုက်နဲ့-( SZ Feat Bunny Phyoe ) 08.ဘယ်ရီးစား-( SZ Feat ကျော်ထွဋ်ဆွေ ) 09.RUN YGN-( SZ Feat. Jauk Jack , ASH ) 10.မမြင်ကွယ်ရာ-( SZ Feat စိုးကြီး၊ရဲလေး ) 11.အယုံလွန်သွားတာပါ-( … Continue Reading →
November 12, 2012 MMA အိမ့်ချစ် အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) စိုးကြီး ရဲလေး ဂျောက်ဂျက် ကျော်ထွဋ်ဆွေ Bunny Phyo Myanmar Artist New Myanmar Albums SZ Leaveacomment
ဂျောက်ဂျက် – တိုင်းသိပြည်သိ
November 12, 2012 MMA အဆိုတော် (ကျား) ဂျောက်ဂျက် ကျော်ထွဋ်ဆွေ လွှမ်းပိုင် Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
ကျော်ထွဋ်ဆွေ – ရပ်ကွက်ထဲကအရူး
ကျော်ထွဋ်ဆွေ – ရပ်ကွက်ထဲကအရူး (Album) ========================= Mediafire Download Links ၀၁။ ငါ့အလှည့် ၀၂။ ရပါတယ် ၀၃။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၀၄။ ကောင်မလေး Feat. ပိုက်ပိုက် ၀၅။ လစ်လိုက် ၀၆။ နှုတ်ဆက်တဲ့စကား Feat. နန်းသူဇာ ၀၇။ အတူတူ Feat. SZ, နန္ဒီ ၀၈။ နေခဲ့တော့ Feat. အိမ့်ချစ် ၀၉။ အသည်းသူခိုး Feat. လွှမ်းပိုင် ၁၀။ ကင်မရာဖုန်း Feat. ဂျောက်ဂျက် ၁၁။ ဖြစ်ပါစေ Feat. လင်းပင်ဟိန်း ၁၂။ ဆရာမလေး ၁၃။ အရူး HulkShare Download Links 1.Nga A Lae’.mp3 … Continue Reading →
December 21, 2011 MMA အိမ့်ချစ် အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) ဂျောက်ဂျက် ကျော်ထွဋ်ဆွေ လွှမ်းပိုင် လင်းပင်ဟိန်း New Myanmar Albums3Comments
The Reunion-Rock Star + BLF
01.The Reunion -SZ,Soe Gyii,KH$,JoukJack 02.Put your hands up in the sky – SZ,Soe Gyii 03.Battle Music – Jouk Jack, KHS 04.စကားကိုထိန်းပြော – စိုးကြီး Ft- Right-D 05.သူခိုး – ဂျောက်ဂျက် 06.Angel -SZ 07.ဆရာမလေး-Kyaw Htut Swe 01.The Reunion Direct Download Mediaifre 02.Put your hands up in the sky Direct Download Mediaifre 03.Battle Music Direct Download Mediaifre 04.စကားကိုထိန်းပြော Direct … Continue Reading →
August 3, 2011 MyanmarHipHopChannel.Com အခွေ (အများ) ဂျောက်ဂျက် ကျော်ထွဋ်ဆွေ Myanmar Artist SZ Unreleased Albums B-Lord Rock Star Leaveacomment
မင်းအတွက် ၃ (Hip Hop)
01 တစ်သက်လုံးချစ်မယ့်သူ – ဆူဇီ 02 တန်ဖိုး – ယုန်လေး Feat အောင်သူ 03 ဂန္ဓ၀င်အချစ် – J Me Feat ဂျူး 04 ကြွေလွင့်တော့မယ် – အိမ့်ချစ် 05 သူမနဲ့အိပ်မက် – Snare Feat သဇင် 06 မိုးတိမ်ကဗျာ – ရသ Feat နီနီခင်ဇော် 07 ခွင့်လွှတ်နိုင်မလား – ဂျောက်ဂျက် Feat K.H.$, မိုးယမုံ 08 သူစိမ်းဖြစ်ပြီလား – နန္ဒာ 09 သည်းခံပြီးတော့မင်းစောင့်မယ်ဆိုရင် – လန်ဘား Feat နက်ကျော် 10 လှည့်စားတတ်သူ – သင်းရနံ့ Feat … Continue Reading →
February 11, 2011 စိုင်းညီဖြိုး အိမ့်ချစ် အခွေ (အများ) ရသ ဂျောက်ဂျက် ကျော်ထွဋ်ဆွေ ယုန်လေး သဇင် J-Me New Myanmar Albums အကြင်နာ ဂျူး နန္ဒာ နီနီခင်ဇော် နက်ကျော် ဆူဇီ အောင်သူ လန်ဘား မိုးယမုံ သင်းရနံ့ Snare5Comments
အလန်းတွေနဲ့ မြန်မာ Hip Hop (MYMC)
Underground Hip Hop တွေထဲက အရင်က သီချင်းတွေနဲ့ အခုPopular ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းတစ်ချို့ ရောစပ်ပြီးလုပ်ထားတဲ့ Playlist လေးပါ။ ၁) ဟိုလှုပ်ဒီလှုပ် –9mm ၂) ဘ၀ ဘ၀ – Acid ၃) အဲဒါပြောတာပေါ့ – ထိန်လင်း | ရသ | Bigg-Y ၄) လက်လက်ကိုထလို့ – Bobby Soxer ၅) 24 Hours7Days – Cyclone ၆) ငါ့သမီးလေးတော်လိုက်တာ – D Beez ၇) သေးသေးကြီးကြီး – Fire Cracker
December 15, 2010 amedeo 9mm စန္ဒီမြင့်လွင် ရန်ရန်ချန်း ကျော်ထွဋ်ဆွေ ကြက်ဖ Acid Cyclone D-Beez D.Beez FireCracker G Tone J-Me SZ Too Big Leaveacomment